Mpamatsy masinina Granulator Extrusion Twin Screw Extrusion mpamatsy sy orinasa | YiZheng
Inona ny masinina kambana Extrusion Fertilizer Granulator?
Masinina fitifirana Double-Screw Extrusion dia teknolojia granulation vaovao tsy mitovy amin'ny granulation nentim-paharazana, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, zezika ary indostria hafa. Ny granulation dia dingana lehibe indrindra amin'ny granulation vovoka maina. Tsy vitan'ny hoe mamaritra ny habetsaky ny zezika granular izy io, fa mifandraika amin'ny kalitaon'ny vidin'ny zezika ihany koa.
Fitsipi-piasan'ny masinera kambana fantsom-bokatra Granulator
Ity pelletizing asa an'ny Masinina Granulator zezika Extrusion Extrusion dia nohatsarain'ny toe-piainana mekanika mikoriana manokana sy ny rafitra ao anatin'ny faritra avoaka. Voalohany indrindra, miaraka amin'ny fihodinam-bokon'ny visy roa, ny fitaovana ao amin'ny faritra extrusion miaraka amin'ny fikosehana haingam-pandeha miverimberina sy ny fanetezam-bolo matetika mba hampitomboana ny mety ho fifangaroana eo amin'ireo molekiola ao amin'ireo fitaovana. Faharoa, fifandonana mafy sy fikosehana amin'ny faritra extrusion, mampisondrotra ny tsindry extrusion ary mijanona ho marin-toerana amin'ny fanjakana ambony. Ny mari-pana amin'ny faritra fanerena avo lenta dia mety hiakatra ambonin'ny 75 ℃ haingana. Amin'ny lafiny iray, ny tsindry amin'ny fitaovana sy ny mari-pana dia mahafeno tanteraka ny fepetra mahavelona. Etsy ankilany, ny fiovan'ny homogeneous mahery dia nanova ny firafitry ny molekiola, mba hanatsarana ny kalitao sy ny tanjaky ny granules amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana sy fivoahana amin'ny tsindry avo mba hahazoana vokatra zezika avo lenta.
Tombony azo avy amin'ny masinin-kambana fantsom-bokatra Granulator
(1) Fahombiazana azo itokisana sy tahan'ny granulate avo, tanjaka granule tsara ary hakitroka betsaka
(2) Fampifanarahana malalaka amin'ny akora mahazatra.
(3) Tsy misy vokany manimba amin'ny firafitry ny fitaovana misy mari-pana ambany.
(4) Ny granulation dia vita amin'ny tsindry, tsy mila binder, afaka mampanantena ny fahadiovan'ny vokatra.
(5) Ny granulator dia manana rafitra matevina, mora amin'ny fikojakojana sy fanamboarana
(6) Ny ampahany mitondra fiara lehibe dia vita amin'ny alika avo lenta, vy tsy misy fangarony, titanium, chromium sns, izay porofon-ketraka, porofon-kery, porofo avo lenta ary manana androm-piainana maharitra.
Twin Screw Extrusion Fertilizer Granulator Machine mampiseho video
Safidy maodely roa an'ny Screw Extrusion ho an'ny zezika
Haben'ny ankapobeny (L × W × H)
Teo aloha: Granulator Extrusion matevina
Manaraka: Fitaovana zezika voajanahary semi-wet amin'ny fampiasana Crusher
Fampidirana Inona no atao hoe Cyclone Powder Dust Collector? Cyclone Powder Dust Collector dia karazana fitaovana fanalana vovoka. Ny mpanangona vovoka dia manana fahafaha-manangona avo kokoa amin'ny vovoka miaraka amin'ny gravité manokana lehibe kokoa sy ireo sombina matevina kokoa. Araka ny fiheveran'ny vovoka, ny hatevin'ny vovoka dia azo ampiasaina ho vovoka voalohany ...
Fampidirana Inona no ampiasain'ny Conveyor Belt Sidewall Mitsivalana Mitsivalana? Ity Large Angle Inclined Belt Conveyor ity dia tena mifanentana amina volavolan-tsokosoko misy vokatra maimaim-poana amin'ny sakafo, fambolena, fanafody, kosmetika, indostria simika, toy ny sakafo snack, sakafo mangatsiaka, legioma, voankazo, confectionary, akora simika sy hafa. ..
Fampidirana Inona ny masinina mifono zezika Static? Ny rafitra famonoana mandeha ho azy dia fitaovana famonoana mandeha ho azy izay afaka miasa miaraka amin'ny fitaovana zezika BB, fitaovana zezika biolojika, fitaovana zezika mitambatra ary fitaovana zezika mitambatra, ary afaka mameno ny refy mandeha ho azy araka ny mpanjifa ...